Kaoperativa mihazo ny faritra Atsinanana Mangataka ny hametrahana azy ireo eny Ampasampito farafaharatsiny
Tsy mankasitraka ny hamindrana azy ireo etsy amin’ny toby fiantsonana etsy Andohatapenaka ireo kaoperativa mihazo ny faritra Atsinanana.
Misy amin’izy ireo mantsy no hajanona eny Ambodivona ihany noho ny fananany fotodrafitrasa matanjaka. Nisy ny soso-kevitra natolotr’ireo koperativa tsy maintsy hafindra toerana ny amin’ny hamerenana azy ireo ao ambadiky ny tobim-pivarotan-tsolika total eny Ambodivoina ihany, toerana efa nisy azy ireo taloha. Raha sanatria tsy mety, hoy ny tompon’andraikitra dia tokony hafindra eny Ampasampito izahay, toerana izay tsy hamono antoka ny mpandeha satria tsy dia lavitra loatra. Manantena ny hanampian’ny minisiteran’ny fitaterana azy ireo koperativam-pitaterana mihazo ny faritra Atsinanana ireto. Kasaina hotanterahina tsy ho ela ny famindran-toerana azy ireo.